२०७८ कार्तिक ९ मंगलबार
जुवातास खेलिरहेका पाँच युवा नगदसहित दिक्तेलबाट पक्राउ
सुकेटारमा नेपाल वायु सेवा निगमको तीन उडान कटौती
कञ्चनपुरमा चितुवा नियन्त्रण गर्न हात्तीसहितको टोली परिचालन
छोरी पलकको बिहे गर्ने उमेर हुँदा पनि उतिकै जवान छिन् आमा श्वेता तिवारी,यस्तो छ फिटेसनको राज
दिक्तेलबजारमा हरिको घरबाट पाँच जना युवा यस्तो अबस्थामा फेला
लमजुङमा भूकम्पको धक्का,स्थानीयवासी घरबाट सडकमा निस्के
महिलालाई पोखरा लेकसाई होटलमा काममा लगाइ दिन्छु भन्दै यौन शोषण गर्न सुरेश र ऋषि फिल्मी शैलिमा समातिए
सिन्धुलीमा पन्ध्र, १६ र १७ वर्षीया बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने छ जना पक्राउ
सुन्दरी नायिका कंगना रनौतले पारदर्शी लुगा लगाएर हिँडेपछि देखियो तमासा
बिरामीको स्वास्थमा गम्भीर लापरबाही : बिना दर्ता औषधि पसलको कुशेमा हालिमुहाली
केटाबाट केटी बनेकी माया गुरुङको बाहुनसंग बाजा बजाएर भयो प्रेम विबाह (भिडियो सहित)
केपी ओलीको आँखाको इसारामा जब कलाकार विल्सनविक्रमले उड्नै लागेको फ्लाइट क्यान्सिल गरे…
पाँचथरमा बस दुर्घटनामा घाइते भएका एक बालक र महिलाको मृत्यु, ६२ जना घाइते
अभिनेता शाहिद कपुरलाई फ्यानले सोधे अनौठौ प्रश्न, भने ‘घरमा बच्चाको सम्हाल्न मुश्किल कि पत्नी’
यसकारण आफ्नी छोरीलाई अमेरिका पठाउन चाहान्छन् शाहरुख
साइकलमा सुप बेच्ने नेपाली डोलराज १८ वर्षमा यसरी बने १७ रेस्टुरेन्टका मालिक, जान्नुहोस रोचक कहानी
असोज १५ २०७८, शुक्रबार
पढ्न लाग्ने समय: < ४ मिनेट
एजेन्सी- सन् २००३ मा डोलराज गैरे आफ्नाे सोख पूरा गर्ने र कमाइ बढाउन भारतको भोपाल आएका थिए । भोपाल आएर उनले साइकलमा सुप, स्यान्डविच र बिर्यानी बेच्न सुरु गरे । आज तिनै डोलराज भाेपाल सहरको सबैभन्दा प्रसिद्ध फास्ट फुड कर्नर ‘सागर गैरे’को मालिक बनेका छन् । याे सहरमा ‘सागर गैरे’ का १७ वटा आउटलेट छन् ।
भनिन्छ, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो सीपलाई स्वीकारेर निष्कपटतासाथ काम गर्‍याे भने उसलाई सफल हुन केहीले रोक्न सक्दैन । डोलराज गैरेलाई पनि त्यस्तै भयो । सन् २००३ मा उनले सुप बेचेर खाद्य उद्योगमा काम गर्न थालेका थिए । त्यतिबेला उनीसँग कुनै पसल वा पुँजी थिएन । द बेटर इन्डियासँग डोलराजले भनेका छन्, ‘खाना पकाउनु मेरो सोख हो, म घरमा सुप, बिर्यानी र स्यान्डविच बनाउने गर्थे र अफिसबाट फर्किएपछि फुर्सदमा साइकलमा ती खानेकुरा बेच्थेँ । आफन्तहरूले पनि मलाई जिस्काए तर भोपालका मानिसलाई मेरो हातको स्वाद मन पर्‍याे । यही प्रेमले आज म यहाँ छु ।’
जागिरबाट सुरु भयो व्यवसाय
डोलराजको मूलघर नेपाल हो । उनी सामान्य किसानका छोरा हुन् । उनका धेरै आफन्त नातेदार भारतमा बस्थे । तिनै आफन्त नातेदारको आशमा उनी सन् १९८० मा कामको खोजीमा भारत आएका थिए । ८ कक्षासम्म अध्ययन गरेका डोलराजले सुरुमा दिल्लीमा काम गरे । पछि उनले मध्यप्रदेश पर्यटनमा सरकारी जागिर पनि पाए । सरकारी जागिर खान थालेपछि उनको परिवारले ठाने कि अब डोलराज व्यवस्थित भयो । तर डोलराजको योजना अर्को थियो । घरपरिवार र आफन्तको वास्ता नगरी उनी आफ्नो लयमा लागे । त्यतिबेला उनको जागिर करिब ३ बजे सकिन्थ्यो । यही समयलाई किन सदुपयोग नगर्ने भनेर साइकलमा ट्याङ्की बाँधेर सुप बेच्न थाले । डोलराजको सुप यति चर्चित भयो कि उनी सहरभरि ‘साइँली सुपवाल’ भनेर चिनिन थाले । तर यो नाम जोगाइराख्न उनीहरू कडा परिश्रम गर्थे ।
करिब एक वर्षपछि उनले जागिर छोडे र एउटा सानो कोठा भाडामा लिए । उनलाई पहिलो पसल किन्न पाँच वर्ष लाग्यो । उनले भोपाल बजारको १० नम्बर पसल किने । यही १६० वर्गफुटको पसलबाट तिनीहरूको प्रगति सुरु भयो । यही सानो पसलमा अहिले पनि १६ जना मानिस काम गर्छन् ।
भोपालको यो फास्ट फुड रेस्टुरेन्टको मेनुमा सबै प्रकारका खाना पाइन्छ । तर यहाँका स्यान्डविच र सुप उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी मन पराउँछन् । डोलराज भन्छन्, ‘हामी हरेक परिकारमा आफ्नै मसला प्रयोग गर्छौं । चाहे स्यानडविचका लागि मेयोनेज होस् वा चाउचाउको मसला । त्यसैकारण मानिसहरूले यहाँ पाउनेजस्तो स्वाद अन्त पाउँदैनन् ।’
उनीहरूले सरसफाइ र गुणस्तरमा विशेष ख्याल राखेका छन् । दुई वर्षअघि उनले कम्पनीको रूपमा ‘सागर गैरे’ दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि यसका थुप्रै फ्रेन्चाइजहरू पनि खुलेका छन् । भोपालमा १७ वटा आउटलेट छन् जहाँ उनी समयसमयमा रेखदेख गर्न पुग्छन् । सबै आउटलेटमा प्रयोग हुने मसला एकै प्रकारका छन् । चाँडै छतरपुर, सागर र इन्दुरेमा पनि आउटलेट खोल्ने उनको तयारी छ ।
बर्गरलाई टक्कर दिने लक्ष्य
उनका अनुसार भोपालबाहेक अब लखनउ र मुम्बईमा पनि ‘सागर गैरे’ को फ्रेन्चाइज खोल्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । उनका छोरा सागर आफ्नो ब्रान्ड देशैभर फैलाउन बाबुसँगै मिलेर काम गरिरहेका छन् । ‘भारतका सबैजसो सहरमा विदेशी ब्रान्ड बर्गरको आउटलेट छन्, यस्तैगरी हामी किन गर्न सक्दैनौं ? नाफा मात्रै कमाउने हाम्रो सिद्धान्त कहिल्यै नभए । सकेसम्म धेरै मानिसलाई मद्दत गर्न चाहन्छौं ।’ पुराना दिन सम्झँदै डोलराज भन्छन्, ‘म आफ्नै हातले स्याण्डविच बनाएर मान्छेलाई बेचेको सम्झन्छु । त्यसले मलाई साँच्चै आनन्द दिन्छ ।’
डोलराजको मेहनत र आफूप्रतिको विश्वास साँच्चिकै उनको सफलताका कारण हुन् । तथापि, यसरी आफूले तयार पारेको स्वाद हरभरिकाले मन पराउँछन् भनेर उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन् ।
अमेरिकाले अनुदान दिएको फाइजर खोप आज नेपाल आउदै, यस्ता व्यक्तिले भने लगाउन नपाउने
नायिका शिल्पा र राजले हाले शर्लिनविरुद्ध ५० करोडको मानहानी मुद्दा
दाँतमा किरा लाग्यो ? नआत्तिनुहोस्, दाँतको किरा मार्ने यी हुन् अचुक घरेलु उपाय
आलुले १ मिनेटमै निको पार्छ दाँतको दुखाई, जान्नुस् ५ घरेलु उपाय
छालामा एलर्जी भयो ? नआत्तिनुहोस् तपाइँको घरमै छन् ओखती
अब बंगुर पाल्न नपाइने, फार्म हटाउन निर्देशन !
छोराका कारण शाहरुख निकै अप्ठ्यारोमा फस्दा पनि आमिर, अजय र अक्षयले किन दिएनन् साथ ?